Global Voices teny Malagasy » “Mpanao Ady Totohondry Be Fangorahana” Ao Japana Nanome Fiofanana Sy Fanantenana Hoan’ireo Mpanao Ady Totohondry Madinika Filipiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Avrily 2015 12:41 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Japana, Fanatanjahantena, Hevitra, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara
Mpampiofana Japoney Eiji Yoshikawa (ankavanana) sy Cirilo Espino (ankavia) nibata ny tompondakan'ny ady totohondry tao amin'ny Nosy Mindanao ao Filipina
Manome fanazarantena sy fanampiana ho an'ireo mpilalao ady totohondry mahantra avy ao Filipina ilay Japoney mpamokatra horonantsarimihetsika fantatra amin'ny maha- mpilalao ady totohondry matihanina be fangorahana azy mba hanome aingam-panahy ireo atleta te-ho tompondaka tahaka ilay olomanga Filipiana Manny Pacquiao.
Taorian'ny fihaonana tamin'ireo mpilalao ady totohondry mitolona [amin'ny fiainana] sasantsasany avy ao Filipina, nangoraka tamin'ny fepetra iainan'izy ireo i Eiji Yoshikawa  ary nanapa-kevitra hanome azy ireo fanazaratena matihanina. Saingy ankoatra ny fizarana ny fahaizany manokana, nangataka tamin'ireo namany sasany sy ireo Japoney mpilalao ady totohondry hafa ihany koa izy mba hanome fanohanana fanazarana sy fanohanana ara-bola ho an'ny fianakavian'ireo Filipianina mpilalao ady totohondry. Toarian'ny roa taona, nahomby ny fanazarantena nataon'i Eiji mpilalao ady totohondry roa izay nandray anjara tamin'ny fifaninanam-pirenena.
Niresaka tamin'ny Global Voices mikasika amin'izay heviny i Eiji fa afaka manampy ny sasany amin'ireo mpianany hiala amin'ny fahantrana ny filalaovana ady totohondry.
Tsy mitaky diplaoma sy mari-pahaizana ny filalaovana ady totohondry. Tsy afaka mamaky teny ianao fa afaka miady. Eo ambony ringy, mitovy ny manankarena sy ny mahantra. Raha mandranitra ny fahaizanao ianao, dia mety ho lasa Manny na Nonito. [Filipianina tompondakan'ny ady totohondry].
Miharihary fa vitsy ihany no mahanika ny faratampon'izao tontolo izao, saingy afaka mianatra zavatra betsaka momba ny fiainana tahaka ny hoe iza ianao, ny herinao sy ny fahalemenao, indrindra rehefa resy amin'ny fifaninana ireo mpilalao ady totohondry.
Tsy mitoetra maharitra ela ny fehikibon'ny tompon-daka, fa ny fianarana momba ny tenanao sy izao tontolo izao kosa tsy vitan'ny hoe maharitra ela fa mihalalina sy mihatsara kokoa.
Saingy mampahatsiahy ireo mpianany (mpiofana) matetika izy fa tsy tokony heverina ho làlan-tokana hialana amin'ny fahantrana ny ady totohondry. Izany no mahatonga azy mandrisika ireo mpilalao ady totohondry mba hamita ny fianaran'izy ireo. Manohana ny fanapahan-kevitry ny mpilalao ady totohondry handefa ny zanany any an-tsekoly ihany koa izy.
Iray amin'ireo Filipianina mpilalaon'i Eiji tamin'ny lalao ady totohondry ao Tokyo.
Ny zavatra niainan'i Eiji amin'ny fanomezana fanazarantena ho an'ireo Filipianina mpilalao ady totohondry sy ny iraka ataony manaitra amin'ny fahantrana ao Filipina no lohahevitry ny horonantsary fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe ‘Tabataba any anaty ala’ . Jereo ny sombintsombin’ ny horonantsary eto ambany:
Asehoan'i Eiji amin'ny sarimihetsika ireo sekoly isan-karazany ao Japana ary tena miabo avokoa ny valintenin'ireo mpianatra. Maro ireo naneho ny fahavononany hanome fanohanana hoan'ireo mahantra mpilalao ady totohondry.
Fisantarana andraikitra iray nitondra fiovana teo amin'ny fiarahamonina onenan'ireo mpilalao ady totohondry ny fananganana tranobe fanaovana fanatanjahan-tena izay tanteraka noho ny hetsika fanangonam-bola natombok'i Eiji sy ny namany.
Manangana toeram-pilalaovana ady totohondry ao amin'ny fiarahamonina Filipina amin'ny alalan'ny ezaka fanangonam-bola ao Japana.
Malaza ao Filipina ny ady totohondry ary maro ireo tanora no maniry ny hanara-dia ilay tompon-dakan'ny ady totohondry Manny Pacquiao . Saingy tsy ny rehetra no ho lasa Pacquiao ary an-jatony, raha tsy an'arivony ireo mpankafy ady totohondry mbola mijanona ho mahantra sy tsy mahazo fanazarantena sahaza. Soa ihany fa misy ireo ‘mpilalao ady totohondry matihanina be fangorahana’ tahaka an'i Eiji izay tsy manasongadina ny fahantran'ny mpilalao ady totohondry ihany fa manainga ihany koa ireo olona ao Japana sy Filipina hanome fanampiana ireo mpanao fanatanjahantena sy ny fianakaviany.
Avy amin'i Eiji Yoshikawa ny sary rehetra, nahazoan-dalana
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/04/15/69157/
 mpilalao ady totohondry matihanina be fangorahana azy : http://mizutani4.wix.com/eijiyoshikawa
 Eiji Yoshikawa: http://www.eiji.tv/
 Manny Pacquiao: https://globalvoicesonline.org/2006/11/25/philippines-boxing-champ-captivates-a-nation/